Ny compresseur rivotra mihodina rotary dia malaza any amin'ny ozinina, zavamaniry, na toerana fanamboarana rehetra noho ny tsingerin'ny fandehany. Raha toa ny karazana compresseur an'habakabaka hafa dia tsy afaka miasa afa-tsy amin'ny tsingerin'ny / ivelan'ny tsingerina, mihodina tsy mijanona manodidina ny famantaranandro ny visy rotary. Amin'ny tsingerin'ny adidy 100% dia tsy tokony hakatona ny compresseur rivotra mihodina ary manomboka miverina miverimberina.
Raha mbola refesina tsara ny compresseur an'ny rotary rotary dia ambony noho ny ankamaroan'ny compresseur rivotra hafa ny fahombiazany. Ny maodely tsara indrindra amin'ny compressor visy rotary dia manampy ireo orinasa hampitombo ny fahombiazany manerana ny rojom-pamokarana.
MODELY LPF-5 LPF-8 LPF - 10 LPF - 15 LPF - 20 LPF - 30 LPF - 50 LPF - 75 LPF - 100 LPF - 120 LPF - 150 LPF - 175
Herin'aratra KW 4.0 5.5 7.5 11 15 22 37 55 75 90 110 132
Karazana mitondra fiara Belt-Driven Voatosika mivantana Direct-Driven
tsindry bara 7-10 7-12 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5 7-15.5
Fidiran'ny rivotra m3/ min 0.6 0.8 1.0 1.7 2.4 3.6 6.6 10 12.5 15 19.8 23
jer 21.4 28.6 35.5 60 85 127 233 360 440 530 699 820
Fomba fampangatsiahana Fanamafisana ny rivotra
Haavo tabataba dB (A) 62 62 62 62 64 66 66 69 69 75 75 75
fivoahan'ny Rp3 / 4 Rp3 / 4 Rp3 / 4 Rp3 / 4 Rp3 / 4 Rp1 Rp1 1/2 Rp2 Rp2 Rp2 1/2 Rp2 1/2 DN80
Size L (mm) 750 750 910 1170 1170 1250 1500 1780 1780 2000 2500 2500
Lanja kg 170 180 195 310 350 420 580 1350 1500 2450 2500 2600
Kalitao azo antoka: Ny faran'ny rivotra avo lenta miaraka amin'ny teknolojia Alemana dia ampiasaina amin'ny compressor rotary rotary. Ny visy roa ary ny fefy mihidy super dia miantoka ny fihazakazaky ny masinina miaraka amin'ny tabataba ambany sy ny fiainana lava kokoa.
Fifanarahana amin'ny tontolo iainana: Ny compressors-ntsika rotary rotary dia mahazaka ny hafanana ambony sy ny tontolo iainana mando, ny teknolojia fampihenana ny tabataba no ampiasaina amin'ny rafitray, ary tsy ilaina ny fametrahana fametrahana manokana. Faritra kely iray dia ampy amin'ny fivezivezan'ny rivotra sy ny fikojakojana ny milina.
Fiasa tsotra sy fikojakojana: Ny compressors an'ny rotary rotary dia fehezin'ny PLC mandroso izay misy ny fiarovana sy ny diagnostika amin'ny lesoka mahery vaika, misy fepetra azo raisina avy hatrany rehefa mahita ny lesoka izy.
Angovo sy fitehirizana vola: Miaraka amin'ny fahafaha-manitsy ny fivoahan'ny rivotra manomboka amin'ny aotra ka hatramin'ny 100 isan-jato, ny compressors dia mihazakazaka amin'ny fomba mahomby indrindra hahazoana antoka fa hitazona ny vidiny. Raha tsy mihinana rivotra ny compresseur aorian'ny fotoana maharitra dia hakatona izy io mba hitsitsiana angovo sy hampihena ny vidin'ny fandidiana. Na izany aza, rehefa mitombo ny fanjifana ny rivotra dia hanomboka ho azy ny compressor.
Fahombiazana avo: Ny compresseur an'ny rotary rotary dia miorina tsara ary mora ovaina, lasa loharano angovo mahomby sy be mpampiasa indrindra eny an-tsena izy io ary mahatonga ny rafitry ny vokatrao hilamina sy araka izay azo atao.
Misy koa ny baoritra tantely.
Misy boaty hazo.
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny Global-air, dia nifidy vokatra vita tsara sy voarindra tsara avy amin'ny orinasa manana traikefa efa ho 20 taona eo amin'ny sehatry ny indostria ianao. Manome serivisy an-tserasera 24 ora amin'ny alàlan'ny ekipa mpivarotra matihanina sy za-draharaha izahay.
Ny fonction Global-air rehetra dia feno fonosana, vonona hiasa. Herinaratra iray sy fifandraisana misy fantsom-pifandraisana iray fotsiny, ary manana rivotra madio sy madio ianao. Ny fifandraisanao amin'ny Global-air (s) dia hiara-miasa akaiky aminao, manome fampahalalana ilaina sy fanampiana, hatrany am-piandohana ka hatrany am-pamaranana, hiantohana ny fitaovanao hipetraka sy hasiana antoka soa aman-tsara.
Ny serivisy eto an-toerana dia azo atolotry ny teknisiana manerantany momba ny rivotra na ny Ivotoerana Serivisy nahazo alàlana eo an-toerana. Ny asa fanompoana rehetra dia vita miaraka amin'ny tatitra antsipirian'ny serivisy omena ny mpanjifa. Azonao atao ny mifandray amin'ny Global-air Company mba hangataka tolotra serivisy.
Teo aloha: 3 In 1 Integrated Screw Air Compressor Compact Unit Miaraka amin'ny Screw Air Compressor, Air Dryer Ary Air Tank
Manaraka: 1.0 M3 / min ~ 12 M3 / min Fanamainana rivotra amin'ny refrigerant miaraka amin'ny Refrigerant R410A ho an'ny rafitra Air Compressor
1.0 M3 / min ~ 12 M3 / min Refrigerated Air Dryer wi ...
Kalitaon'ny 0.75HP ~ 30HP Cast Iron Piston Air P ...
Volavolan-tsolika famonosana dingana roa amin'ny angovo ...